‘लम्पसारवाद’ का विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ – खेम थपलिया Weekly Nepal
‘लम्पसारवाद’ का विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ – खेम थपलिया
आजको दुनियाँमा सर्वहारावर्गको वैचारिक तथा अपराजेय हतियार भनेको माओवाद नै हो । यसलाई हामी मालेमावाद पनि भन्न सक्तछौँ ।
यसका निम्न विशेषता रहेका छन् ः
विचार, व्यवहार र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका खास–खास बेलामा खास–खास नेताहरूको खास–खास पहलकदमी हुने गरेको पनि छ तर नेपालमा यस्तो कुरा बिरलै देख्न र पढ्न पाइन्छ । पछिल्लो चरणमा मोहन वैद्य ‘किरण’ को एउटा विषाक्त भनाइ निकै चर्चामा रहेका े छ । आन्तरिक रूपमा प्रचण्डसित साँठगाँठ गरिरहनुभएका र उतैको खर्चपर्चले चलिरहनुभएका मोहन वैद्य ‘किरण’ ले एक कार्यक्रममा भन्नुभएछ, “क्रान्ति गर्छु भनेर हिँडेका विप्लवहरू पनि अहिले आएर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिलाई किनारा लगाउँदै राजतन्त्रमा पुगेका छन् ।” के यो कुरालाई किरणले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ? के यस्तो छुद्रता र केटाकेटीपन उहाँलाई सहाउँछ ? यो कुरा सामान्य छैन । कमरेड किरणको यो कुरा असमान्य मनोविज्ञानको द्योतक हो । यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ । यसको कमरेड किरण खण्डन गर्नुभएन भने यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ र गरिन्छ पनि । कमरेड किरणको यस्तो भनाइले लम्पसारवादी संस्कृतिलाई नै मद्दत गर्दछ ।